Bernardo Silva Hooyo Sheeko Xaqiiqo Weedheer Xogta
Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Boortaqiiska Bernardo Silva Hooyo Sheeko Xaqiiqo Weedheer Xogta
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan oo loo yaqaan 'Nickname';'Messi'. Dabeecaddayada Bernardo Silva iyo akhbaaraha aan la isku qorin Xaqiiqooyinka sawir-qaadaha ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan, nolosha qoyska iyo kuwo badan oo OFF iyo ON-Pitch xaqiiqda yar ee la yaqaan ee ku saabsan isaga.
Haa, qof walba waa ogyahay Bernardo Silva ee awoodiisa kubada cagta, lakiin dhowr ciyaaryahan ayaa ka fiirsanaya noloshiisa ka baxsan garoonka taas oo ah mid xiiso leh. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, bilaabi.
Bernardo Silva Hooyo Sheeko Xogta Xogta Lahaanshaha -Nolosha Hore
Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva wuxuu ku dhashay 10th Agoosto, 1994 Lisbon, Portugal Mota Veiga Silva (aabaha) iyo Maria João Silva (hooyo).
Sida wiil yar, wuxuu ku koray Benfica. Wuxuu ahaa dhalinyaro dhalinyaro ah oo leh IQ sare. Dabeecaddiisa iyo shaqo adag ayaa ah sheyga loogu talagalay halka uu maanta joogo kubada cagta adduunka.
Wuxuu bilaabay xirfadiisa kubada cagta siddeed sanno jir wuxuuna ugu dambeyntii u soo baxday nidaamka dhalinyarada ka hor inta uusan kulankiisii ​​ugu horeysay u safan Benfica B ee heerka labaad ee kubadda cagta Portugal ee 2013. Bernardo wuxuu ahaa Nicknamed 'Messizinho ' iyo 'Messi' sababtoo ah tayadiisa weyn.
Bernardo Silva Hooyo Sheeko Xogta Xogta Lahaanshaha -Jorge Mendes waa Agent
Bernardo waa macmiil u ah adduunka Jorge Paulo Agostinho Mendes. Mendes wuxuu ka mid yahay wakiillada kubada cagta ugu saameynta badan adduunka, iyadoo macaamiisha ay ku jiraan Cristiano Ronaldo, David de Gea, Diego Costa, James Rodríguez, Marcos Rojo iyo José Mourinho. Waxaa badanaa loo yaqaanaa a "Super-agent".
Waxa loo magacaabay Wakiilka ugu fiican sanadka oo ka dhacay Globe Soccer lix jeer oo isku xiga, laga bilaabo 2010 ilaa 2015. Mendes waxa uu bilaabay inuu yahay ciyaaryahan, lakiin waxaa lagu qasbay inuu ka tago rajadiisa mustaqbalkiisa ciyaareed ka dib markii uu diiday kooxo Portugal ah markii uu joogay 20s. Taa baddalkeeda, wuxuu ka soo baxay dukaanka kirada video, wuxuu u shaqeeyay DJ-da wuxuuna furay barkad iyo goobo lagu caweeyo oo ku yaalla Caminha, oo ah degmada waqooyi galbeed ee Portugal.
Dad badan ayaa aaminsan in kubadsameeyaha uu ku biiri doono Manchester United marka uu ka tago Monaco, madaama xiriirka 'super-agent' Jorge Mendes - oo tababare Jose Mourinho uu yahay mid ka mid ah macaamiishiisa. Guardiola ayaa ku guuleystay tartanka loogu jiro qof ku riyaaqay intii uu socday kulankii Monaco ee 5-3 lugta hore ee wareega quarter-finalka Champions League.
Bernardo Silva Hooyo Sheeko Xogta Xogta Lahaanshaha -Markaad ka baxdo bidix
Jorge Jesus of Benfica wuxuu ku guuleystay koobab badan. Laakiin ilaa maanta taageerayaasha kooxda ayaa muhim u ah isaga oo aaminsan inuusan helin iimaan ku aadan tayada qaaska ah, iyadoo Bernardo Silva loola jeedo sida ugu fiican.
Weligiis ma rumeysan yahay in kubad sameeyaha da'da yar. Muddo hal xilli ciyaareed ah, Jorge Jesus ayaa u ogolaaday Bernardo inuu ciyaaro daqiiqad 31 seddex kulan oo uu u saftay kooxda koowaad ee Benfica. Bernardo Silva qudhiisa ayaa dhowaan qirtay in hoosta Ciise uu lahaa 'Uma rajo dhigin inaan ku garaacno kooxda Benfica', isagoo leh: "Markii Jorge uu tababar ku qaatay daafaca bidix Benfica waxaan ogaaday inaanan mustaqbal ku laheyn kooxda."
Benfica waxa uu ahaa koox Bernardo ah oo loo jecel yahay qalbigiisa. Sidaas daraadeed qalbigiisu wuxuu jecelyahay inuu heysto 'E Pluribus Unum' xardhan ee gacanta bidix. Riyooyinkoodii iyaga la jiray waxaa ka xaday Jorge Ciise.
Bernardo Silva Hooyo Sheeko Xogta Xogta Lahaanshaha -Magacyo la mid ah, Nooca la midka ah ee Ciyaaryahan, Saaxiibo Wanaagsan
Kubadsameeyaha ayaa lagu arkay isagoo ku sugan City isagoo sheegay inuusan noqon doonin kaliya Silva oo ku biiraya kooxda. Labaduba waxay noqdeen saaxiibo fiican markii ay ogaadeen in ay wadaagaan magacyo isku mid ah iyo shakhsiyad iyo sifooyin garoonka dhexdiisa ah. Labadaba waxay leeyihiin cagajuglayn dhinaca bidix ah, indhaha oo loogu talagalay kaarka, xarun hoose ee culeyska iyo awoodda qallafsan ee haysata difaaca mucaaradka.
Bernardo Silva Hooyo Sheeko Xogta Xogta Lahaanshaha -Xirfad hurudda iyo sirdoonka
Bernardo Silva wuxuu waqti ku qaataa dabaqa iyadoo indhaha la xiray illaa saacad ka dib markii uu tababarka la sameeyo. Hagaajinta awoodaada fikirkaada waxayna mas'uul ka tahay sirdoonka goobta garoonka. Tani waxay ka dhigeysaa mid ka mid ah kubadda ugu caansan adduunka. Sirdoonkiisa ayaa sidoo kale lagu arkay aragtidiisa fikradeed oo si fiican u xushmeeya suxufiyiinta.
Bernardo Silva ayaa muujiyay sida uu ula dhaqmayo kooxdii uu la shaqeynayay saaxiibtinimadiisii ​​uu kula qabsan lahaa wadan cusub, luuqad cusub iyo dhaqanka cusub. Waxaa loo isticmaalaa socdaalka kubada cagta. La qabsashada deg deg ah ee Faransiis ah da 'yar oo keliya ayaa ka caawiyay inuu koro qof ahaan.
Nasiib wanaag wuxuu bartey Luqadda Ingiriiska ka hor inta uusan ku riyoon in uu yimaado England. Bernardo waa mid caqli leh, dabeecadiisii ​​hurdada ka dib tababarka wuxuu siinayaa awood uu ku fekero baahidiisa, sidaas darteed "Samee cawska marka qorraxdu iftiimayso".
Bernardo Silva Hooyo Sheeko Xogta Xogta Lahaanshaha -Horyaalka 1 Ciyaaryahanka Sanadka 2016-2017
Waa inay noqotaa Silva, oo ka soo horjeeda Edinson Cavani, oo ku guuleystay horyaalkii horyaalka Ligue 1 ee Sanadka, lakiin waxa uu siiyay Monaco xiddigo badan, codkooda ayaa u muuqda mid kala qaybsan. Tani waa aragti ah Goal.
Dhamaan ciyaartoyda soo jiidashada leh ee xayawaanka koonfur koofurta France xilli ciyaareedkan, waxay aheyd xiddiga ugu fiicnaa Portugal oo xilli ciyaareedkii ugu fiicnaa xilli ciyaareedkan.
Ciyaaryahankii hore ee Barcelona Fabinho ayaa qirtay inuu ku faraxsan yahay Febraayo, 2017: "Waxa laga yaabaa inuu yahay xubin muhiim u ah kooxda. Marka loo barbardhigo dadka u bahdilayaasha ah sida Radamel Falcao iyo Kylian Mbappe, waxtarkiisa si fudud ayaa loo arki karaa. Kadib dhamaantiis, ma ahan ciyaaryahan leh nambar jajab ah. Sidoo kale, ma siinayo foorarka, boobka ama awoodda sida Benjamin Mendy ama Tiemoue Bakayoko. Markii aan tagay Monaco ee 2014, ma aanan ogeyn inay sidan u socotay. Run ahaantii, wuxuu yimid sida aan la garanayn Faransiiska. Waan la yaabay markii ay saxiixeen kaliya hal kulan oo aan la ciyaaray Benfica. Maanta, wuxuu noqday wax kale.
Bernardo Silva Hooyo Sheeko Xogta Xogta Lahaanshaha -Isagu waa ku adag yahay Jeer
Bernardo Silva ayaa qirtay inuu lacag badan ku leeyahay Leonardo Jardim Yaa ka sii badan sida aabbe isaga ka ah tababarihii hore.
In uu erayada... "Shakhsi ahaan, Jardim ayaa i siiyay wax badan," Bernardo Silva ayaa xaqiijiyay. "Wuxuu si fiican u shaqeeyaa ciyaartoyda da'da yar. Waxa uu arkay aniga oo yaraa waxaanan i siiyey fursada. Madaxayga, waxaan dareemay kala duwan. Horumarka ayaan ku soo kordhay kaliya 3 bilood oo aan ku biiray kooxda Faransiiska. "
Jadim ayaa aad u jecel yahay inuu ka dhigo lambar dhaqameed 10 ka dib markii ugu horeysay oo uu isaga bixiyo lambarka 15. Sababta ayaa ah sababtoo ah wuxuu ku faraxsan yahay cagta cagta bidix, dhaqdhaqaaqiisa iyo xirfadihiisa. Bernardo ayaa 132 u saftay Monaco, isagoo kooxda ka caawiyay horyaalka Ligue 1 ee 2016 / 17.
Xusuus-qorka Kubadda Cagta ee Benfica
Bruno Fernandes Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xogta looyaqaano
Joao Felix Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Nelson Semedo Story Sheets Sheeko Xaqiiqo Weyn
Andre Gomes Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Diogo Jota Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'
Taariikhda wax laga beddelay: Juun 17, 2020
Joao Moutinho Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha Xogta
Andre Silva Storyhood Plus Xogta Warka Xogta